Tartanka Amazon Echo Google Home wuxuu ku kacayaa $ 130 | Wararka IPhone
Tartanka Amazon Echo Google Home wuxuu ku kacayaa $ 130
Tan iyo markii ay Amazon bilawday Echo, qalabkeeda casriga ah ee aan kula falgalin karno amarrada, aragno jadwalkayaga, muusigga muusiga ... inbadan ayaa ah soo saarayaasha sharad ku furaya soo saarista nidaam la mid ah. Sida laga soo xigtay xanta qaar Apple waxay ku shaqeyneysay qalab la mid ah in muddo ah oo si macquul ah ula shaqeyn lahaa Siri, laakiin waqti xaadirkan macluumaad badan kama hayno. Midkood haddii aan macluumaad dheeraad ah hayno waa Google Home, oo ah aalad ay Google ku soo bandhigtay shirkii ugu dambeeyay ee loogu talagalay horumariyayaasha bishii Maajo, aalad si rasmi ah loo soo bandhigi doono 4-ta Oktoobar oo ay weheliso noocyada cusub ee casriga casriga ah ee Pixel, oo ay soo saartay shirkadda HTC.
Sidaan awoodnay inaan u aqrino booliska Android, qalabkan oo ay maamuli doonto Google Now, kaaliyaha Google, wuxuu suuqa ku gaari doonaa qiimo dhan $ 129, $ 50 ayaa ka raqiisan Amazon Echo, oo ay maamusho Alexa, kaaliyaha shirkadda weyn ee iibka internetka. Guriga Google wuxuu noo ogolaanayaa inaan raadino internetka, ku darno hawlo, muusig garaacno, raadino macluumaadka ku saabsan filimada, alaabada, taxanaha, walxaha ... waxaas oo dhan oo horey loogu dhawaaqay amarka Ok Google.
Google Home sidoo kale wuu awoodi doonaa ku hagaaji aaladaha otomatiga guriga taas oo noo ogolaaneysa inaan ka helno xarun cimilo oo aan ku leenahay barxada gurigeenna, warbixinnada taraafikada, koontaroolka heerkulka gurigeenna iyadoo loo marayo heerkulbeegyada Nest, kor u qaadista iyo hoos u dhigista indhoolayaasha, laydhadhka shidan iyo dabka iyo waxyaabo kaloo badan. Kaaliyaha Google gudaheeda, waxaan ka heli doonnaa Google Assistant, kaaliyaha shakhsi ahaaneed ee Google, oo horeyba ugu soo muuqday barnaamijka Allo oo baranaya sida aan ula macaamilno.
Hoyga Google runti ma bixiyo wax cusub oo hadda aan lagu samayn karin Amazon Echo dambe., Maaddaama qalabka Amazon uu sidoo kale la jaan qaadayo qalabka guryaha laga isticmaalo si loo xakameeyo gurigeenna. 4-ta Oktoobar, waxaan ka takhalusi doonaa shakiga waxaanna ogaan doonnaa haddii Google Home uu na siiyo wax kasta oo xiiso leh oo ka dhigi kara inuu noqdo cunsur aan looga maarmin gurigeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Tartanka Amazon Echo Google Home wuxuu ku kacayaa $ 130
Jarmalka ayaa ku qasbay WhatsApp inay joojiso ururinta xogta isticmaalaha